Sir James Paul McCartney MBE(*18. Jona 1942 Liverpool) diaBritishmpihira, mpihira ary mpamoron-kira, mpikambana teo aloha tao amin'ny tarikaThe Beatles.
Teraka 18 i Paul McCartney. June 1942 any Liverpool, hopitalin'i Walton. I James McCartney rainy, dia avy any Irlandy ary Katolika. Niasa be izy nandritra ny androm-piainany, saingy izy no malaza amin'ny mozika jazz. Nanana tarika jazz ihany koa i James ary nitsoka trompetra, piano, clarinet, ary zavamaneno hafa.
Paul McCartney dia nateraky ny ray aman-dreny tamin'ireo razany irlandey (James McCartney sy Mary Patricia Mohin). Niaraka tamin'ny Rahalahy Michael (teo ambanin'ny solon'anarana Mike McGear, niezaka tao amin'ny The Comafford Comedy Scaffold) izy ireo, dia nentina tao amin'ny finoana katôlika. Nodimandry i Nenycancertetezana rehefa nanan-taona i Paul 13. Nandritra ny fahazazany dia novidin'ny dadany voalohany ny azygitaraary hatramin'izay nitsanganany ny trompetra sy ny piano amin'ny tenany manokanaJazztarika, dia nanome lesona voalohany tamin'ny mozika i Paoly. Fantany ny sekolin'ny Liverpool InstituteGeorge Harrisonary nanomboka niara-nianatra gitara izy ireo (ho an'ny tombotsoa - Paula dia gitara havia manana rantsantanana havia mihazona ny tendany amin'ny ilany mifanohitra).
Tantaran'ny vondronaThe Beatlesnanomboka tamin'ny herintaona1957, rehefa mandeha ny fivahiniana masinaanglisy WooltonNampiditra azy i PaolyJohn Lennon, izay nanaiky azy ho ao amin'ny tarikaQuarry Menas guitarist. Amin'izao fotoana izao, ny fifandraisana mozika malaza indrindra amin'ny fotoana rehetra -Lennon/ McCartney.Lennonary i McCartney dia nanomboka niasa tamin'ny fanoratana hira, ka nanoratra azy ireo nandritra ny roa taona niarahan'ny fiaraha-miasa manodidina zato. Ny fialan-tsasatra rehetra dia niara-niasa ary nilalao gitara. Tsara ny fianarana tany am-pianarana tany, niresaka teny alemana sy espaniola izy, saingy naleony mozika, ary dia nanomboka nanao ny fianarana niaraka tamin'ny tarika taorian'nyUKary raha tokony hanohy ny fianarana izy, dia nanomboka niasa tamin'ny maha mpanampy mpamily azy teo amin'ny toeram-pivarotana izy ary namily ny tady tao amin'ny orinasa.
Ny fararano amin'ny taona1958miaraka amin'ny tarikaQuarry Menrename toJohnny sy The Moondogsary amin'ny taona1959Natsangana ny vondrona, tamin'ity indray mitoraka ityThe Beetles Silver. Amin'ny herintaona1960dia novana farany ny vondronaThe Beatles(mama -voangorydia midika hoevoangory,nandresydia midika hoebeat, beat, beat) ary nahazo fifandraisana tamin'nyalemainaHamburg. Misaotra ny fialan'ny gitarista bassist tany am-boalohanyStuart SutcliffNy fitaovana ampiasainy dia nalain'i McCartney.
I Paoly dia tao amin'ny tarikaThe Beatlesny fahaverezany amin'ny taona1970. Taorian'ny fahafatesan'ilay mpitantana vondronaBriana Epstein, dia nanjary mpitarika tsy narenina tamin'ny tarika ary indrindra indrindra ny mpikambana mavitrika aminy. Ny hirany tsara indrindra sy malaza indrindra amin'ny andron'ny Beatles dia ahitanaEleanor Rigby(1966),Tsy afaka mividy ahy(1964),Andao hanao izany(1970) ary indrindra indrindraHey Jude(1968) aomaly(1965).
Amin'ny herintaona1967Nanomboka nankafy bebe kokoa i Paul (sy ireo mpikambana hafa tao amin'ilay tarika)zava-mahadomelinaAry herintaona taty aoriana dia lasa ny tarika manontoloIndiamba hisaintsaina eto. Ankoatra ny zava-mahadomelina, i Paul dia nanandrana ny mpikambana voalohany tao amin'ny Beatles niaraka tamin'ny mozika elektronika ary nitifitra tsy miankinaambanin'ny tanysarimihetsika. Eo ambany fitarihan'i Paul, izy koa dia miseho ho toy ny olona iray diso fanamelohana sy ampahibemaso (saingy amin'izao fotoana izao dia tena hita miharihary) film, BeatlesMagical Mystery Tour, fenopsychedeliclamina sy sehatra.
Niaina nandritra ny taona maro niaraka tamin'ny Jane Asher mpilalao sarimihetsika i Paul saingy tamin'ny herintaona1967nihaona tamin'nyLinda Eastman,Malagasympaka sary. ny andro12. March 1969Nanambady izy ireo, ka nahatratra valo androJohn Lennonamin'nyYoko Ono. Nanangana ny zanakavavin'i Linda avy amin'ny fanambadiana voalohany nataon'i Heather i Paul. Together withLindadia nanan-janaka telo - Mary Annu,Stellu Ninuary i James Louise. Samy nilaza ireo mpivady roa ireo fa ankoatra ny sivy andro i McCartney dia niditra1980inAnaranafonja (ho an'ny fanananarongony) isanandro.
Tamin'ny volana Aprily1970Paul McCartney nanambara ampahibemaso ny vondronaBeatlesnandao (na dia efa tsy nisy akory aza ny tarika tao amin'ny 1969), ny hafa dia nanaraka, ary ny mpikambana rehetra dia nanolo-tena tamin'ny tetikasany. Nampianatra ny vadiny i PaolyLindamilalao ny fanalahidy ary mandray azy ao amin'ny tarika vaovaoelatra, natsangana tamin'ny taona1971. Ny tononkira voalohany dia singa irayAndro hafa. Na dia nanakiana ny hirany sy ny filalaovany aza ireo mpitsikera an'i Linda,elatranahazo mari-pankasitrahana maroGrammyary v70. taonadia nahomby.
McCartney nandritra ny fampisehoana irayelatra, 1976
Amin'ny herintaona1972dia manala ny vondrona ho amin'ny fitsangatsanganana voalohanyUnited Kingdomary herintaona taty aorianaEoropa. Amin'ny herintaona1973publish Theelatraangamba ny tsara indrindraraki-kira Band On The Run. Nomen'i McCartney tsy tambo isaina izyraki-kira, na irery na miaraka amin'ny vondrona irayelatra. Anisan'ny malaza indrindra ireo voalaza etsy ambonyRAM,Venus sy MarsnaTug of War.
Any afovoany80. sidinaniara-niasa tamin'nyStevie WondernaMichael Jackson. Lasa izy sy ny vadinyTsy mpihinan-kenaary mpiaro ny zon'ny biby.
Amin'ny herintaona1994Yoko Ono dia mandalo any amin'ireo mpikambana sisa ao amin'ny Fihetsik'i Beatles Lennon, izay mirakitra hira miaraka aminy. Ny lalan'ny farany amin'ny tarika,Real LovenyFree as a Bird, dia navoaka tamin'ny albumsAnthology 1(Apple Records, 21 novambra 1995) aryAnthology 2(Apple Records, 18, Martsa 1996). hiraAnkehitriny ary avy eo, planned forAnthology 3(Apple Records, 28, Oktobra 1996) tsy vita.
Amin'ny herintaona1997Nokleary i McCartney, ary azo heverina ho anisan'ny mpiangaly mozika 20 tsara indrindra izy, fa tsy ny sangisangy sandoka ihany. taonjato.
Amin'ny herintaona1998Maty ny vadin'i PaolyLindaamin'nycancertratrany. Na izany aza, niaraka tamin'i McCartney tamin'ny herintaona2002Nanambady fanindroany niaraka tamin'ny modely izyHeather Millsary tamin'ny Oktobra2003Teraka tamin'izy ireo i Beatrice Milly McCartney zanany vavy. Tsy ela dia nisara-panambadiana i Heather.
Nanolo-tena ho an'ny mozika klasika ihany koa i Paul, ary namorona asa maromaro (oh.Liverpool OratoriumnaStanding Stone). Amin'ny herintaona1999dia napetraka tao amin'ny Hall of Fame, nanao hetsika ho voninahitraLindaary koa ny fampiratiana voalohany ny sary hosodoko.
ny andro6. Jona 2004, tahaka ny mpikambana voalohany ao amin'ny tarikaBeatles, natao tamin'ny fampisehoana taoPrague.
ny andro20. února 2008dia nandray ny loka ho an'ny fandraisany anjara mozika mandritra ny androm-piainanyBRIT Awards.
Ao amin'ny CD 2009 1 DVD + 2, ny fampisehoana mivantana mitondra ny lohateny hoe Good Evening New York City dia natonta nandritra ny alina maromaro ary ahitana hira roa avy amin'i Paula + Wings sy Beatles.
9. Oktobra 2011inLondonNanambady fanintelony izy dia nanambady an'i Nancy Shevell.
Mandritra izany fotoana izany, ny lahatsorany farany dia mitoetra ho rakitsoratraKisses on the Bottomny taona2012, izay nanomezany voninahitra ny feon-kira tiany indrindra avy amin'ny 30. ary 40. taona ary nanolotra azy ho 70. fitsingerenan'ny andro nahaterahany.
ny andro12. Desambra 2012Nankany amin'ny fampisehoana izy121212, natokana ho an'ireo tra-boinahurricane Sandy, niaraka tamin'ireo mpikambana taloha tao amin'ny tarikaNirvana(nihaona izy ireo voalohany hatramin'ny nipoahan'ny taona1994). Nihira ilay hira mahazatra hoe "Cut Me Some Slack". Hita ao amin'ny lahatsary fanadihadiana Sound City tarihin'i Nirvana mpanafikaDave Grohl, izay tokony navoaka voalohany tamin'ny volana febroary2013. Ao amin'ny 12. October 2013 dia namoaka rakikira vaovaovaovaomiaraka amin'ny hira anaram-boninahitra mitovy anarana.
Sir James Paul McCartney, MBE (* 18. 1942 Jona Liverpool) dia Britanika mpitendry zavamaneno, mpihira sady mpamoron-kira, mpikambana taloha tao amin'ny The Beatles.BiografiePaul McCartney teraka ny ray aman-dreny ny irlandey razambeny (Jakoba McCartney sy Mary Patricia Mohinová). Niaraka tamin'ny Rahalahy Michael (teo ambanin'ny solon'anarana Mike McGear, niezaka ny hilalao ao amin'ny band of Comedy Scaffold) izy ireo, dia nentina tao amin'ny finoana katôlika. Maty noho ny homamiadan'ny nono ny reniko fony i 13 nandritra ny taona maro. Tamin'ny mbola kely, ny rainy nividy ny voalohany gitara sy ny tenany ho nilalao taloha trompetra sy ny pianô ao amin'ny tarika Jazz, i Paoly dia nanome ny lesona voalohany ny mozika mihitsy. Any am-pianarana, ny Liverpool Nihaona tamin'i George Harrison Institute, ary dia nanomboka niara-nianatra ny gitara (avy tamin'ny te hahafanta-javatra - ary i Paoly dia kavia gitara kofehy namelatra ny fitaratra mitazona ny vozony ho amin'ny lafiny mifanohitra).
John Lennon sy Paul McCartney dia iray amin'ireo mpamoron-kira ekipa mahomby indrindra teo amin'ny tantaran'ny malaza hudby.Vznik sy fampitsaharana ny Fiaraha-miasa naharitra ny fiaraha-miasa hatrany am-piandohana ny The Beatles tamin'ny faramparan'ireo taona 50. ary 60. flight 20. taona ary nifarana tamin'ny famaranana ny tarika tao 1970. Dia mifototra amin'ny fifanarahana am-bava teo amin'ny roa mpanoratra, izay nilaza fa ny hira rehetra izay manome misy iray amin'izy ireo na izy roa miaraka miaraka, dia ho soniavin'ny roa indray miaraka.
McCartney II no singam-pahaizana faharoa natokana ho an'ny mpihira Anglisy sady mpanao mozika Paul McCartney. Navoaka tao amin'ny 1980 izy, herintaona talohan'ny fahaverezan'ny tarika Wings. Ny album McCartney II dia mozika tsy mitovy amin'ny asa taloha taloha nataon'i McCartney, satria manana ambaratonga avo indrindra amin'ny synthesizers sy singa mozika experientes.
Linda Louise McCartney, teraka Linda Louise Eastman (24. 1941 Septambra New York - 17. 1998 Aprily Tucson, Arizona) Firenena Etazonia mpaka sary, keyboardist, mpikatroka zon'ny biby sy ny vadin'ny Paul McCartney.
McCartney dia ny solo voalohany nataon'i Paul McCartney izay navoakan'i 17. Aprily 1970 tany Royaume Uni. Ny zavatra mahaliana momba ity rakikira dia McCartney fanaka rehetra sy ny feo, afa-tsy ho an'ny sasany vocals fanohanana avy amin'ny vadiny voalohany, Linda McCartney ao ny tenany. Araka ny teniny, McCartney nilalao tamin'ny "basse, amponga, gitara, gitara Acoustic, piano, mellotron, taova, sy ny ankizy xylophone ny tsipìka sy ny zana-tsipìka." Ankoatra izany, dia ahitana ihany koa mahaliana ny be dia be ny fitaovana lalany.
James Louis McCartney (* 12 September 1977 London) dia mpiangaly mozika britanika, mpanoratra ary mpanao sary sokitra monina any Londres. Izy no hany zanakalahin'ilay mpamoron-kira sy mpikambana taloha tao The Beatles, Paul McCartney, ary ny vadiny voalohany, mpaka sary rock sady mpikatroka ny zon'ny biby, Linda McCartney. Ao amin'ny 21. Navoakan'i 2010 tamin'ny Septambra ny lahatsorany voalohany teo ambanin'ny lohateny Light Available.
Ram dia rakikan'i Paul McCartney sy Linda McCartney navoakan'i 17. May 1971, ity no hany rakikira nomena ity mpivady ity. Ity no faharoa faharoa nataon'i McCartney, navoaka teo anelanelan'ny faran'ny Beatles sy Wings. Ankoatra an'i McCartney sy ireo mpihira hafa, i Wings Denny Seiwell dia ao amin'ny rakitsoratra ihany koa.
7: Band ao amin'ny Run
Band on the Run dia albumy faharoa nataon'i Paul McCartney & Wings. Natao nanomboka tamin'ny Aogositra hatramin'ny Septambra 1973 ao Niger Niger Lagos ny asany. Ny mpamokatra ny rakikira dia Paul McCartney, navoakan'ny 1973 tao amin'ny Apple Records tamin'ny volana Desambra. Ity no rakikira farany nataon'i McCartney nivoaka tao amin'ity trano famoahana ity. Ny horonantsary Rolling Stone dia nasongadina tao amin'ny 418. Zarao ny laharana 500 miaraka amin'ireo albums tena tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra. Author sary eo amin'ny fonony dia Clive rakikira Arrowsmith sy ny nisambotra an'i Paoly sy Linda McCartney, Denny Laine, Michael Parkinson, Kenny Lynch, James Coburn, Clement Freud, John Conteh sy Christopher Lee.
Thrillington dia ny album classic Paul McCartney, izay notifiriny noho ny anarana fanta-daza an'i Percy "Thrills" Thrillington. Navoaka i 29. Aprily 1977 ao Royaume-Uni sy 17. May 1977 any Etazonia. Ity dia rakitsoratry ny rakikiran'i Ram. Natao tao amin'ny 1971 ilay rakikira, saingy nanapa-kevitra ny hanemotra ny famotsorana azy i McCartney satria tamin'izany fotoana izany, niaraka tamin'i Linda vadiny, nanangana ny tarika Wings izy. Ao amin'ny 1995 sy 2004, dia navotsotra indray ny CD tamin'ny CD sy ny 21. Enga anie ny 2012 ho anisan'ny famoahana Deluxe an'i Ram.
9: Fiainana Wild
Ny Wild Life no rakikira voalohan'ilay vondrona Anglisy Wings. Navoaka tamin'ny Desambra 1971 avy amin'ny Apple Records ary ny mpamokatra azy dia Paul McCartney sy Linda McCartney. Nosoratana tamin'ny Jolay sy Aogositra tao amin'ny 1971 tao amin'ny fiantsonan'ny Lalana Abbey Road. Ao amin'ny tabilao Amerikana, ny laharana faha-200 dia laharana faha-10, raha ao amin'ny UK UK Albums Chart dia faha-11. Tao Etazonia dia lasa platinum.
Red Rose Speedway no rakipahalalana faharoa ao amin'ny vondrona Anglisy Wings. Navoaka tamin'ny April 1973 avy amin'ny Apple Records ary novokarin'i Paul McCartney. Nosoratana nandritra ny 1972 tao amin'ny fianarana samihafa tany Londres (Abbey Road Studios, Studios Olympiad, Studios Morgan, Trident Studios ary Island Studio). Ao amin'ny tabilao Amerikana, ny Billboard 200 dia tao amin'ny gorodona voalohany, fa ny UK UK Albums Chart dia fahadimy. Tany amin'ny firenena roa tonta no nahitana ny takelaka volamena.
Liverpool Sound Collage dia rakipeo studio nataon'ny mpiangaly mozika Paul McCartney, navoaka tao amin'ny 2000. Misy horonantsary avy amin'ny 1964, 1965, 1991 ary 2000. Ampahany maromaro amin'ny rakikira no nanasongadina mpikambana ao amin'ny The Beatles, tanora mpamokatra hafa ary ny rock band Welsh Fur Super Animals. McCartney koa dia niara-niasa tamin'ny tarika ny Rings Around the World
12: Ny karazana McCartney
Ny fahaiza-McCartney ny hetra ho an'i mozika Paul McCartney album, izay navoaka 18. Novambra 2014. Izany dia fitambaran'ireo 42 hira avy irery McCartney ny asa, ary ny The Beatles, milalao mpanakanto tahaka an'i Barry Gibb, Brian Wilson, Billy Joel, Bob Dylan, Willie Nelson, Alice Cooper, Smokey Robinson, Kiss sy ny maro hafa.
'04 Summer Tour i Paul eoropeanina McCartney ny fitsidihana, izay nitranga tao amin'ny fahavaratra ny 2004.Během ity McCartney Paul fitsidihana voalohany nitsidika ihany koa ny Repoblika Tseky, izany hoe 6. Jona. Lasa aloha voalohany mpikambana ao amin'ny The Beatles, izay vystoupil.Záznam fampisehoana tany Saint-Pétersbourg dia nafahana tamin'ny DVD Paul McCartney amin'ny Kianja Mena sy ny firaketana ny fampisehoana tao Glastonbury indray ny DVD The Years.KapelaPaul McCartney McCartney - vocals, basse, gitara, klavírRusty Anderson - gitara, manampy zpěvBrian Ray - gitara, gitara basse, manampy zpěvPaul "Wix" Wickens --panendry, angorodao, gitara, harmonica, percussion, manampy zpěvAbe Laboriel Jr. - amponga, percussion, manampy zpěvTermínyRepertoárJetGot mba hahazo anao teo an-LifeFlaming PieAll ny LovingLet Ankino ItYou Ahy dia tsy hahita ny WomanMaybe A harato AmazedThe aho Long Ary rivotra, mankao RoadIn dia be ny DangerBlackbirdWe afaka miasa izany outhere TodayAll Zavatra maintsy manaraka PassI'll ny SunFor No OneCalico SkiesI've vao nahita FaceMichelle (afa-tsy ao Paris) Eleanor RigbyDrive CarPenny LaneGet isika BackBand amin'ny RunBack ao amin'ny USSRLive ary aoka DieI've Got A FeelingLady MadonnaHey JudeYesterdayFollow Me (afa-tsy Glastonbury) Aoka Bei nahita ny Miantona ThereHelter SkelterSgt. Pepper ny Lonely Fo Club Band / Ny EndOdkazyReferenceV lahatsoratra ity nampiasaina fandikana ny lahatsoratry ny lahatsoratra Paul McCartney 2004 Summer Tour amin'ny teny anglisy Wikipedii.Externí rohy
14: Venus sy Mars
Venus sy Mars no rakitsary misy ny vondrona Anglisy Wings. Navoaka tamin'ny May of 1975 avy amin'ny Capitol Records izy ary novokavin'i Paul McCartney. Ao amin'ny American Billboard 200, ary ao amin'ny UK UK Albums Chart, dia nahatratra ny toerana voalohany ilay album. Tany amin'ireo firenena roa ireo dia lasa platinum izy.
15: Mitsangàna mba hilalao
Press to Play dia rakikira natokana ho an'ny solosaina Paul McCartney mpiangaly mozika anglisy. Navoaka tamin'ny volana Aogositra tamin'ny 1986 avy amin'ny Parlophone (UK) sy ny Capitol Records (USA) izany, ary niaraka tamin'i McCartney Hugh Padgham ny mpamokatra azy. Ao amin'ny tabilao Amerikana, ny laharana faha-200 dia tao anatin'ny faha-telo taonany, raha tao amin'ny UK UK Albums Chart momba ny fahavalo. Tany amin'ny Fanjakana Royaume-Uni, tonga teo amin'ny takelaka volamena izy io.
London Town dia rakipeo studio an'ny vondrona Anglisy Wings. Navoaka tamin'ny Martsa 1978 avy amin'ny Parlophone sy Capitol Records ary novokarin'i Paul McCartney. Voasoratra teo anelanelan'ny Febroary 1977 sy ny Janoary 1978 tamin'ny fikarohana samihafa, anisan'izany ny Abbey Road Studios sy ny AIR Studios. Ny UK's Albums Chart dia nahazo ny laharana fahaefatra, raha nahatratra faharoa kosa ny US Billboard 200.
17: Miantso ny USSR
Snova v SSSR (Rosiana: Sova ao amin'ny USSR) no rakitsary fitoeran'ny mpihira britanika sady mozika Paul McCartney. Navoaka tamin'ny 1988 izy io tamin'ny Firaisana Sovietika tamin'izany fotoana izany. Ny rakikira dia tsy misy afa-tsy amin'ny fandrakofana ny rock and roll compositions 20. taonjato. Tao amin'ny 1991, taorian'ny nianjeran'ny USSR, navoaka eran'izao tontolo izao ny rakikira miaraka amin'ny fanampiana ny lozisialy iray.
18: Fingotra amin'ny haavon'ny feo
Wings at Speed ​​of Sound dia rakitsary aroson'ny vondrona Anglisy Wings. Navoaka tamin'ny March of 1976 avy amin'ny Capitol Records izy. Nosoratana nanomboka tamin'ny Janoary ka hatramin'ny Febroary io taona io tao amin'ny Abbey Road Studios tany Londona ary novokarin'i Paul McCartney. Ao amin'ny charts UK, ny UK Albums Chart dia faharoa, raha ny Amerikana billboard 200 no voalohany. Tao Etazonia dia lasa platinum.
Stella Nina McCartney Willis, OBE (přechýleně McCartney Willis, * 13. 1971 Septambra in London) dia Britanika mpamorona lamaody sy ny zanakavavin'i Paul McCartney McCartneyho.BiografieStella niasa ho an'ny malaza marika (Chloe, Gucci, Adidas, Karl Lagerfeld) natao ny fitafiana for Madonna, Annie Lennox, Gwyneth Paltrow. Nahazo mari-pankasitrahana maromaro izy.
20: Wings (vondrona mozika)
Wings dia vondron-rock iray natsangan'i Beatles Paul McCartney tamin'ny Aprily 1971. Ny Wings dia nanao fahombiazana goavana tao amin'ny 70. taona sy ny fiandohan'ny 80. taona, na dia teo am-piovana foana aza ny fiasan'ny vondrona.
21: Voninkazo any anaty fotaka
Flowers ao amin'ny vovoka no fahavalo irery Studio rakikira nataon'i Paul McCartney, navoaka tamin'ny 1989. Ny raki-kira famotsorana dia niaraka tamin'ny fitsidihana ny Paul McCartney World Tour.Seznam skladebObsazení Paul McCartney - vocals, Acoustic gitara, herinaratra gitara, basse gitara, dia roa ambin'ny folo-tady gitara, Meksikana gitara, piano, synthesizers, amponga, ampongatapaka, percussion, Celeste, sitar, harmonium, manampy vocals, mellotron, percussion, lokanga, kitendry, Miteha
The Tug of War dia rakitsary fahatelo natokana ho an'ny mozika britanika britanika ary mpikambana taloha tao The Beatles nataon'i Paul McCartney. Ity dia tohin'ilay rakikira XCUMX teo aloha McCartney II sy ny album voalohany ofisialiny, izay nalaina tamin'ny famoahana ny band Wings tamin'ny Aprily 1980. Noho ny fandraisam-peo ity rakikira ity, dia nanana fotoana iarahan'i George Martin mpamokatra mozika nandritra ny fotoana kelikely. Ny Tug of War ihany koa no voalohany nalaza McCartney nivoaka taorian'ny nahafatesan'i John Lennon, mpiara-miasa efa ela niandoha tao The Beatles.
23: Feno alim-pahatsiarovana
Memory Saika Full no fahefatra ambin'ny folo Studio rakikira Paoly McCartney. Ao Royaume-Uni, raha tsy mbola navoaka 4. Jona 2007 sy Etazonia ny andro rehetra později.Seznam skladebAutorem hira Paoly McCartney. "Dance Anio hariva" - 2: 54 "Ever Ny ankehitriny Ny lasa" - 2: 57 "Jereo ny Sunshine" - 3: 20 "Mama Mahafantatra ihany" - 4: 17 "Lazao ahy ianao" - 3: 15 "Mr. Bellamy "- 3: 39" fankasitrahana "- 3: 19" Vintage Akanjo "- 2: 22" Izany no Ahy "- 2: 38" tongotro eo amin'ny rahona "- 3: 24 'House ny savoka' - 4: 59" ny Fara Andro Farany "- 2: 57" ataovy mihatohatoka ny loha "- 1: 58Reference
24: Aoka Hihira Azy (song)
"Aoka Izany Ho Antsika" dia hira nataon'i The Beatles avy amin'i John Lennon sy Paul McCartney ao amin'ny 1970, arahin'ny hira iray avy amin'i McCartney ihany. Izy io ihany koa no hira farany talohan'ny nitateran'i Paul McCartney niala ny tarika.
25: Back in the World Tour
Tamin'ny Eran-tany fitetezam-paritra i Paul McCartney Eoropa fitetezam-paritra, izay natao tamin'ny lohataona ny 2003.Po voalohany 6 nilalao fampisehoana (1 any Paris, Barcelona 2, 2 sy 1 tao Anvers in Sheffield) McCartney nahazo ny gripa ary nanana manaraka ireto daty in Sheffield hetsika any amin'ny faran'ny ny fitetezam-paritra. Noho ny aretina dia tsy maintsy ovana indroa lisitra fizahany.
26: New (Album)
Ny vaovao dia mpilalao musician Paula McCartney tamin'ny 16 hariva. Navoaka tamin'ny 14 izy io. October, 2013, ny mari-pamantarana mozika Virgin EMI Records, ary ny rakikiran'i McCartney voalohany, izay nahitana lalao vaovao nanomboka tamin'ny 2007, rehefa navoaka ny Memory Almost Full. Misy hira roa ambin'ny folo ao amin'ilay rakikira, miaraka amin'ny mpamokatra efatra: Mark Ronson, Ethan Johns, Paul Epworth ary Giles Martin. Ao amin'ny UK Albums Chart, ny album dia laharana fahatelo; Ny toerana iray ihany no tratra tao amin'ny Billboard 200.
27: Miverina amin'ny atody
Ny Back to the Egg no rakikira farany indrindra amin'ny vondrona Anglisy Wings. Navoaka tamin'ny 24. May 1979 avy amin'ny Columbia Records any Etazonia, Parlophone dia namoaka izany tany Royaume-Uni tapa-bolana taty aoriana. Nosoratana tamin'ny vanim-potoana samihafa nanomboka tamin'ny Jona 1978 hatramin'ny Febroary 1979 tamin'ny fikarohana samihafa, anisan'izany ny Abbey Road Studios. Ny sarintanin'ny 200 dia laharana faha-8 amin'ny charts Amerikana, raha ny fahitan'ny British UK Albums Chart kosa no fahenina. Tao Etazonia dia lasa platinum.
28: Mihazakazaha ny devoly
Run Devil Run dia rakikira natokana ho an'ny solo-n'i Paul McCartney mpiangaly mozika anglisy. Navoaka tamin'ny Oktobra tamin'ny 1999 avy amin'ny Parlophone izy ary niaraka tamin'i McCartney Chris Thomas ny mpamokatra azy. Nosoratana nanomboka tamin'ny Martsa ka hatramin'ny Mey tamin'io taona io tao amin'ny Abbey Road Studios. Ny rakikira dia rakotra am-pirahalahiana indrindra tamin'ireo taona 1950, saingy misy ihany koa ireo sarin'i McCartney telo nosoratana tamin'ny fomba hafa hira. Ao amin'ny Billboard 200, napetraka tao amin'ny 27 ilay rakikira. toerana.
Flaming Pie dia rakitsary natokana ho an'ny solo-nainan'ny mpiangaly mozika anglisy Paul McCartney. Navoaka tamin'ny May of 1997 avy amin'ny Parlophone sy ny Capitol Records, ary novokarin'i McCartney Jeff Lynne sy George Martin. Ny hira roa avy amin'ny rakikira dia voarakitra ao amin'ny 1992, ny sisa ao amin'ny 1995 mankany 1997. Voatanisa amin'ny fianarana bebe kokoa, anisan'izany ny Abbey Road Studios. Ohatra, ny hira "Used to Be Bad" dia dout miaraka amin'i Steve Miller. Ao amin'ny tabilao britanika ao amin'ny UK Albums Chart, ary koa ao amin'ny American Billboard 200, ny album dia tao amin'ny rihana faharoa. Nanjary volamena izy ireo tany amin'ireo firenena roa ireo.
30: Fahasarotana sy famoronana ao an-tokontany
Ny fandriampahalemana sy ny famoronana ao an-tokontany dia solo an-dahatsary an-tsary nataon'ny mpiangaly musician Paul McCartney. Navoaka tao amin'ny 2005 izy tamin'ny volana Septambra tamin'ny Parlophone sy Capitol Records. Ny mpamokatra azy dia Nigel Godrich. Ny UK Albums Chart UK dia nipoitra faha-enina tao amin'ny US Billboard 200 tamin'ny fahenina. Tany amin'ny firenena sasany dia nahazo takelaka volamena izy.
Omaly (ao amin'ny fandikan-teny Czech omaly) dia hira avy ao amin'ny tarika The Beatles ny 1965 avy amin'ny rakikira Help! .Ačkoli hira dia voalaza amin'ny fomba ofisialy Lennon / McCartney nanoratra azy io ihany no Paul McCartney rehetra. Ny hira dia malaza androany ary, araka ny Guinness Book of Records, dia hira iray izay nanoratana ny ankamaroan'ny hira momba ny mozika malaza. Niandry azy ireo tamin'ny alàlan'ny 3000 Album Help! dia nijanona telo volana taorian'ny famotsorana azy tao anatin'ireo charte britanika voalohany. Ny fampielezam-peo Music Incorporated (BMI) dia milaza azy ao amin'ny 20. Taonjato taorian'io dia niely mihoatra ny fito tapitrisa ny hira tao amin'ny fampahalalam-baovao.
32: Fitaterana ny orana
Driving Rain dia rakikira natokana ho an'ny sangan'asa Paul McCartney, mpiangaly mozika anglisy. Navoaka tamin'ny November tamin'ny 2001 avy amin'ny Parlophone izy. Nosoratana nanomboka tamin'ny Febroary ka hatramin'ny Jona tamin'io taona io tao amin'ny studio studio Henson Recording Studio tao Los Angeles ary novokavin'i David Kahne. Ny sarintany 200 dia napetraka tao amin'ny 26 tao amin'ny takelaka Etazonia. toerana, ao amin'ny UK UK Albums Chart amin'ny 46.
33: Magical Mystery Tour (sarimihetsika)
Ny Magical Mystery Tour dia horonantsary britanika izay manomboka ny band The Beatles. Na iza na iza tsy nahalala ny tantara tao amin'ny Film: Help!, Sarotra ny mahatakatra azy io amin'ity sarimihetsika ity. Ireo mpikambana ao amin'ny tarika dia milalao bus amin'ny fiara fitateram-bahoaka izay mandeha amin'ny dingana tsy hay hadinoina avy any ivelany. Ny horonantsary dia hosodoko amin'ny clips of the Beatles ary manasongadina hatsikana amin'ny teny Anglisy.
Heather Mills McCartney (* 12. 1968 Janoary, Alderhot, United Kingdom) dia British modely, mafana fo iray mpiaro ny zon'olombelona sy ny vadiny faharoa Paula McCartneyho.BiografieNěkolik volana taorian'ny nahaterahany ny fianakaviany nifindra tany Washington. Tsy nanana fahazavana maivana i Heather, niverina tany Londres niaraka tamin'ny reniny izy tamin'ny fahatanorany, nandositra niala ny tranony ary niaina "teny an-dalambe" nandritra ny volana maromaro. Nanana asa izy mandra-pahatonga azy ho modely. Tamin'ny faha-19 taonany dia nitifitra andianà sarimihetsika marobe izy.
"Eleanor Rigby" dia hira hira nataon'ny tarika britanika The Beatles, izay nanamarika an'i Lennon / McCartney ny mpanoratra azy, na dia nosoratan'i Paul McCartney aza izy. Tamin'ny volana Aogositra, 1966 dia navotsotra teo amin'ny lafiny roa miaraka amin'ny "Yellow Submarine". Navoakany koa ny revolisiona tamin'io fotoana io. Nosoratan'ny mpanakanto maro hafa ilay hira, anisan'izany i Vanilla Fudge, Chick Corea na Al Di Meola. Ilay hira dia nomena anarana taorian'ny olona tena izy. Eleanor Rigby dia nalevina tao am-pasana tany St. Petra any Woolton.
36: Miankohoka eo ambany
Kisses on the Bottom dia nosoratan'i Paula McCartney's solo studio, navoakan'i 7. Febroary 2012. Ny rakikira dia misy amin'ny CD sy ny LPs. Izy io dia ahitana rakotra 12 sy hira roa voalohany. Ohatra, Stevie Wonder, Eric Clapton, Bucky Pizzarelli ary Diana Krall, mpamokatra Tommy LiPuma.
37: Fiompiana fiadanana
Pipes of Peace dia rakitsary natokana ho an'ny studio nataon'ny mpiangaly musician Paul McCartney. Navoaka tamin'ny volana Oktônan'ny 1983 avy amin'ny Parlophone (UK) sy Columbia Records (USA). Nosoratana tamin'ny 1980 tamin'ny 1983 tamin'ny volana Jolay, 200 dia navoaka ary mpamokatra George Martin. Misy doka roa miaraka amin'i Michael Jackson ao amin'ny rakikira: "Say Say Say" sy "The Man". Ao amin'ny tabilao amerikanina Billboard XNUMX, napetraka tao amin'ny laharana fahadimy ambin'ny folo ny rakikira, ao amin'ny UK UK Albums Chart amin'ny fahaefatra. Tany amin'ny firenena maro dia lasa platinum.
38: Miala amin'ny tany
Off the Ground dia solo-drakitra novokarin'ny mpanao mozika anglisy Paul McCartney. Navoaka tamin'ny Febroary tamin'ny 1993 avy amin'ny Parlophone (UK) sy ny Capitol Records (USA). Miaraka amin'i McCartney avy amin'i Julian Mendelsohn. Ny sarintany 200 dia nahatratra ny toerana fahafito ambin'ny folo tao amin'ny charts Amerikana, raha ny British UK Albums Chart ny fahadimy.
39: Ilay Fanjakana Ocean
Ny fanjakàn'i Ocean dia ny albumy fahadimy voalohany sy ny boletin'i Paul McCartney voalohany. Izany dia mozika ho an'ny fampisehoana ballet ny anarana mitovy. Navoaka tamin'ny volana 2011 ilay rakikira. Lisitry ny sangan'asa rehetra nosoratan'i Paul McCartney.
40: Ary tiako izy
Ary Tiako Izany dia hira iray nosoratan'i Paul McCartney tao amin'ny 1964 ho an'i Jane Asher, avy eo aminy. Na izany aza, izy dia nomena ny Lennon / McCartney mpivady. Nosoratan'i Beatles nosoratany voalohany ary navoaka tao amin'ny rakikirany A Hard Day's Night. Nanomboka tamin'izay dia nisy maro tamin 'ny coververzí.NástrojePaul McCartney: vocals, baskytaraJohn Lennon: Acoustic kytaraGeorge Harrison: Acoustic gitara sady hitsoka dřívkaRingo Starr kongaReference
41: Amin'ny fanampiana kely avy amin'ny namako
"Miaraka amin'ny fanampiana kely avy amin'ny namako" no fihirana faharoa avy amin'ny rakitra Sgt. Ny Band of Hearts Club Band Singh from 1967 avy amin'ny band British The Beatles. Ny hira dia nosoratan'i Lennon / McCartney (John Lennon, Paul McCartney). Ao amin'ny 2004, ny gazetiboky Rolling Stone dia nahitana ny 311 tao amin'ny lisitry ny 500 ny hirany tsara indrindra. Ohatra, nanao ny hira i Joe Cocker ary namoaka izany tamin'ny alàlan'i 1969 "With Little Help From My Friends".
42: Lalana Abbey
Ny Abbey Road dia ny aloky ny tantara an-tsarin'ny The Beatles. Ny rakitsary farany an'ny The Beatles, Let It Be, izay navoaka tao amin'ny Abbey Road, dia nosoratana talohan'izany. Ny Abbey Road koa dia ny fandraisam-peo firaketana farany nataon'ny vondrona.
Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy, tsy nisy teny manokana voalaza Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy amin'ny teny esperanto Ohatra tsy ampy amin'ny teny esperanto Matetika izy io no ampiasain'ny manamboninahitra ambony, ohatra ao amin'ny departemantan'ny miaramila sy ny polisy. Any Grande-Bretagne sy any amin'ny firenena Commonwealth, ny ritter na baroneta dia ampiasaina miaraka amin'ny anarana hoe anarana na lohateny mitondra ny lohateny ambony ambany. Nampiasaina miaraka amin'ny anarana voalohany na anarana feno, dia tsy zatra amin'ny farany indrindra anarana (toy ny Sir Paul McCartney azo niresaka "Sir i Paoly" fa tsy "Sir McCartney"). Title Sir tsy afaka mendrika, fa koa holovana, niresaka vehivavy tompoko dia tsy mitovy tanteraka, ny fampiasana ny anaram-boninahitra dia toy izany amin'ny fomba fanavakavahana.
44: azafady, azafady
Azafady, azafady indrindra ny album Beatles voalohany navoakan'i 22. Martsa 1963 ho valin-kafatra avy amin'ny fahombiazan'ny singulier azafady. Amin'ireo hira efatra ambin'ny folo ao amin'ny rakikira, valo no nosoratan'ny mpivady mpitarika John Lennon / Paul McCartney.
Ny alina mahery (Night's Night) dia sarimihetsika britika britanika mifototra amin'ny alim-by Aluna Owen an'ny 1964. Ny lahatsary dia nomena ny BAFTA ho sarimihetsika tsara indrindra amin'ny sokajy mozika / comedy 1964.
46: Beatles ho an'ny varotra
Beatles for Sale dia ny alin'ny Beatles fahaefatra nivoaka tamin'ny faran'ny 1964. Navoakan'i Parlophone ary i George Martin no mpamokatra azy. Ny hira dia nalaza tato ho ato, toa an'i Eight Days and Week na izaho dia mpangalatra.
47: Submarine Yellow (hira)
Ny "Submarine Yellow" dia hira hira nataon'ny tarika britanika The Beatles, izay nanamarika an'i Lennon / McCartney ny mpanoratra azy, na dia nosoratan'i Paul McCartney aza izy. Tamin'ny volana Aogositra, 1966 dia nivoaka avy tao amin'ny tokatrano A-droa miaraka amin'i "Eleanor Rigby". Tamin'izany fotoana izany koa izy dia niseho tao amin'ny album Revolver ary roa taona taty aoriana niaraka tamin'ilay anarana sy feo fandrenesana anarana. Ny laharana voalohany tao amin'ny laharana UK dia nalaina voalohany ary naka herinandro vitsivitsy handroahana ny "All or Nothing" avy amin'ny Small Faces. Tao anatin'ny toerana samihafa ilay mpihira dia naharitra telo herinandro.
48: Avelao ary ho faty
Ny "Live and Let Death" no lohahevitr'ilay sarimihetsika Live and Die avy amin'ny andiany James Bond. Nosoratan'i Paul sy Linda McCartney ho an'ny Wings. Iray amin'ireo hirany malaza indrindra izy ireo, ka tonga any amin'ny 2. toerana ao amin'ny American Billboard Hot 100 sy 9. toerana ao amin'ny UK UK Singles Chart.
49: Any amin'ny faritra any Angletera
Any Irlandy dia ny horonam-peon-tsarimihan'i George Harrison, navoaka tao amin'ny 1981 tao Dark Horse Records. Nosoratana tamin'ny Oktobra 1979 sy ny Febroary 1981 ary ny mpamokatra Harrison sy Ray Cooper. Ny hira "izay rehetra Taona Lasa" dia natokana ho an'ny fahatsiarovana ny faramparan'ny John Lennon, ary nilalao tao amin'ny roa hafa teo aloha ny The Beatles mpikambana, Paul McCartney sy Ringo Starr.